Maxay yihiin Arimaha keeni kara inay Soomaaliya sii jirto qaran ahaan ama ay Map-ka Aduunka ka baxdo? | Arlaadi Online
Home Blog Maxay yihiin Arimaha keeni kara inay Soomaaliya sii jirto qaran ahaan ama ay Map-ka Aduunka ka baxdo?
Maxay yihiin Arimaha keeni kara inay Soomaaliya sii jirto qaran ahaan ama ay Map-ka Aduunka ka baxdo?
Talaado April 25, 2017| Arlaadi Oline
Waa dood maalmahaan ka socotay Madasha Talo iyo Tusaale (T&T) oo ah golle ay ku kulmaan waxgaradka iyo caqligii Soomaaliya lahayd, dooda oo weli socota ayaa waxaan kasoo qaatay jawaab usoo diray qoraaga Buugga Qawaaniinta 56 da ee Hoggaaminta, Dr. Abdirahman Ahmed Nuur Sulub waxayna u qorneyd sidaan hoose: Su’aashu waa Soomaaliya ma sii jiri doontaa?
Dr. Sulub: Jawaabtu waa haa iyo maya. labadaba way noqonkartaa. intaynnaan mala-awaal fiican (optimism) ama mala-awaal xun (pessimism) aannaan dooran waxaa jira XEERAR DABIICI AH (universal laws). Xeerarkaasi waa kuwo wada jirka ummadda u shaqeeya iyo kuwo kala-tagga ummadda ka sheqeeya.
Kolkaad taariikhda (mid hore iyo mid dhoow) yara milicsatid, waxaad arkaysaa in ay samaysmaan laba xoog: mid wadajirka ka shaqeeya iyo mid kala-tagga ka sheqeeya. waxaana adkaada hadba kaad si fiican u quudisid.
dawlado iyo imbaradooriyaad baaba’ay waxaa sabab u ahaa Hoggaamiyayaal danaystayaal ah (selfish leaders) iyo mucaarad danaystayaal ah (selfish oppositions).
Haddii aan arrinta Soomaaliya u soo noqonno oo himilo (vision) ka dhiganno: Soomaaliya midaysan (united Somalia), waxaan u baahannahay in aan helno hoggaamiyayaal daacad ah (honest leaders) iyo dib-u-heshiisiin dhab ah (real reconciliation). waana in hadda la bilaabo. Weliba “dib-u-heshiisiintu” way ka horraysaa dhisidda ciidamo qaran.
jiritaankeennu wuxuu ku xiranyahay inta aan ujirno hoggaamiyayaal daacad ah iyo dib-u-heshiisiin dhab ah.